Xamza Nassar: 12 Sano jir shahiiday isagoo sooman oo tusaale u noqday Xasuuqa Yuhuudda ka wado Gaza - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Muuqaalka wiilka yar ee lagu magacaabo Xamza Nassar oo ku shahiiday weerar ay diyaaradaha ciidamada Yuhuudda ku qaadeen Marinka Gaza ayaa noqday mid soo jiitay indhaha dunida, wuxuuna noqday tusaalaha nool ee xasuuqa Yahuudda ku heyso dadka Falastiiniyiinta ah.
Muuqaalka saameynta badan yeeshay ee taabtay qalbiyi badan ayaa ahaa laba muuqaal la is barbar dhigay, isagoo nool iyo isagoo meyd ah oo aad moodo inuu dhoola-caddeynayo, ayna ka muuqato sida uu u ahaa wiil yar oo aan waxba galabsan ee naftiisa ay galaafatay Yuhuudda dhulkiisa xoogga ku heysata.
Sawirka Hamza wuxuu noqday “astaan” u taagan xasuuqa dhiigga badan ku daatay ee ciidamada gumaysiga Israa’iil ku qaadeen Marinka Gaza, kaasoo socda maalintii afraad oo xiriir ah. Wuxuu sababay dhimashada in ka badan 100Falastiiniyiin ah, oo ay ku jiraan 17 carruur ah, marka lagu daro ilaa 500 oo dhaawac ah.
Xamza wuxuu ahaa 12 san jir, wuxuu saacado badan ku jiray Qaboojiyaha Isbitaalka Shifa ee Magaalada Gaza, ka hor inta uusan aabihiis aqoonsan, kaasoo aaday isbitaalka isagoo raadinaya kadib markii uu muddo dheer uu kusoo laaban waayey gurigiisa.
Xamza wuu soomanaa, wuxuuna ka soo baxay gurigiisa oo ku yaal xaafada Shejaiya ee Bariga magaalada Gaza, si uu xoogaa qudaar ah uga iibsado qoyskiisa suuqa xaafada oo qiyaastii guriga u jira hal kiilomitir, markii diyaarad dagaal oo Israa’iil leedahay ay duullaan ku qaaday agagaarka qabuuraha Abu Al-Kass, halkaas oo jirkiisii ay ku tuurtay meel dhowr mitir u jirta halkii uu socday.
“Xamza wuxuu ku noolaa nolol murugo leh, laakiin ilaahay wuxuu u qoray dhammaadkan quruxda badan, wuu shahiiday, isagoo sooman, wejigiisana waxaa ka muuqatay dhoola caddeyn, si muuqaalkiisu astaan ​​ugu noqdo carruurta kale” ayuu yiri adeerkiis Abu Yasser Nassar.
Hamza Nassar Waxaa la dhashay afar caruur ah, isagoo ahaa kan shanaad, wuxuu ahaa Nin yar marka loo eego da’diisa iyo caqligiisa, dadka oo dhan ayaa jeclaa, wuxuuna aad ugu wanaagsanaa waxbarashada. Hooyadiis oo Indhaha la’ waxay geeriyiida wiilkeeda yar ku noqotay naxdin qarracan ah.
Wuxuu ka dhashay qoys qeyb ka ah difaaca reer Falastiin, waxaana hore u shahiiday qaar ka mida adeeradiis iyo abtiyaashiis oo jihaadka qeyb ka ahaa. “Xamza wax badan ma noolaan, laakiin wuxuu xusuustooda ku jiri doonaa dad badan oo ehelkiisa ugu horeeyaan”.
Previous articleMaxaa looga hadlay kulankii dhex maray RW Rooble iyo Madaxweynihii hore Xasan Sheekh..?
Next articleAlshabaab oo shaacisay muuqaal ay ugu baaqeyso dhalinyarrada Ajnabiga inay Somaliya usoo hijroodaan